Nafaqaynta xiriirrada iyo fayruska coronavirus | Mental Health Foundation
Nafaqaynta xiriirrada iyo fayruska coronavirus
Waxaa laga yaabaa in waqti aad uga badan inta caadiga noo ah aan la joogno dadka guryaheena nala wadaaga, haddii ay tahay qoyska, degganeyaasha guriga nala qaybsada ama xataa xayawaanka guriga. Go'idda xiriirka caadiga ah ee aan dadka la yeelanno iyo isku dhawaanshaha badan ee khasabka ah ayaa keenaya in xiriirrada fiican ee aan dadka la leenahay ay iminka aad muhiim u yihiin, markaa:
Waqti sii - waqti gooni ah ugu talagal in aad la xiriirto saaxiibbadaada iyo qoyskaaga
Maskaxda ha ka maqnaan - u feejignow dadka ku jira noloshaada oo ha ku jeedsan telefoonka, shaqada ama danaha kale
Si dhab ah u dhegeyso - waxa ay dadka kale sheegayaan, fahan oo diiradda saar baahiyaha ay xilligaas qabaan
Dadka kale u rukhsee in ay adiga ku dhegeystaan - si daacad ah u sheeg dareenka aad qabto, oo dadka kale maqashii waxa aad sheegayso oo taageero ka hel
Garo xiriirrada aanan habboonayn - xiriirrada waxyeellada leh waxay nagu dhalin karaan murugo. Tan garashadeedu waxay naga caawin kartaa in aan hore u dhaqaaqno oo aan xalal soo helno
Waxaa weliba faa'iido leh in laga fikiro hababka dheeraadka ah ee aan ku badbaadin karno xiriirrada aan dadka la leenahay, ee aan kaga gudbi karno qaar ka mid ah dhibaatooyinka xiriirrada ka abuurma.
Waqti dadka xiriir lagula jiro
Isku tijaabi habab kaladuwan oo aad dadka kula xiriirto - isticmaal telefoonnada, kumbiyuutarrada ama boostada. Maqlidda cod saaxiibtinimo leh, oo aan barannay, ama akhrinta farriin ka timid dadka aan jecel nahay, ayaa naga caawisa in aan dareenno in aan dadka xiriir kula jirno. Waxay tani muhiim u tahay caafimaadkeena maskaxda, gaar ahaan haddii aan keligeen meel ku nool nahay.
Caawi dadka aanan sidaas ugu kalsooni qabin farsamada tignoloojiyadda - dhammaanteen kuma kalsooni qabno ama kuma raaxo qabno wicista fiidiyowga leh laakiin aragga waji saaxiibtinimo leh, oo aan barannay ayaa labada dhinacba siyaado u dareensiin kara in ay dadka xiriir kula jiraan.
Dadka kale taageer - waxaa dhammaanteen faa'iido noo leh ka qayb gelidda hawlaha xaafadda ka socda ee lagu taageero dadka siyaado u nuglan.
Waqti lagu dhiso hubaalo
Ka heshiiya qofba qaybaha uu guriga ka isticmaalayo iyo goorta - tusaale ahaan maalinta dhexdeeda, marka aan u baahan karno in aan shaqayno oo/ama carruurta daryeelno.
Sida ugu fiican u isticmaal bannaanka dhabta ah ee aad haysato – isku day in aad maalintaada qorshaysato, dadka la wadaagto ama isku kala beddeshaan isticmaalka bannaanka, ka war hayso baahiyaha dadka kale ama in yar beddesho sida aad wax u qabato.
Wadaaga hawlaha guriga – sida dhaqidda weelasha, nadiifinta iyo soo iibinta cuntada. Yeelashada hawlo maalin walba caadi noo ah ayaa siyaado noo dareensiin karta in aan xukunka hayno, waqtiga uu xukunka nolosheenu in badan naga lumay.
Waqti hadalka iyo dhegeysiga la wado
Maalin kaste samaysta waqti aad ku wada hadashaan - ka heshiiya goorta ay dhammaan dadka gurigaaga jooga sheegi karaan dareenka ay qabaan - tusaale ahaan, maalintaas waxa sida ugu badan noogu adkaa iyo waxa aan ka mahadnaqayno.
Bixiya fursad wax la iskugu sheego oo la isku dhegeysto dhaleeco la'aan - isku sheegidda dareennada, iyadoo aanan laga cabsi qabin in nala cambaareeyo ama nala canaanto, ayaa siyaado noo dareensiin karta degganaan iyo in aan qofba qofka kale isku dhow nahay. Xasuuso in ay dhici karto in aan dhammaanteen dareensan nahay walwal iyo xanaaq dhow oo ka badan sida caadiga ah.
Waqtigan waa la dhaafi doonaa laakiin taas ka hor, waxaan u baahan nahay in uu qofba qofka kale la hadlo, dhegeysto oo uu daryeelo, annagoo isku tiirinayna waxa aan iskugu imannay iyo waxa aan rabno in aan mustaqbalka ku aragno.
Haddii xiriirradaadu ay rafaad ku jiraan la xiriir khadka caawinta xiriirrada ee bilaashka ah ee SPARK oo ah 0808 802 2088